Ajjeechaa Haacaaluu Hundeessaan kan himatamte Laamrot Kamaal akka gadhiifamtu murtaa'e
1 year, 2 months ago 1163 Qoodi
Mana Murtii Olaanaa Federaalaa ramaddii Lidataatti dhaddachi Farra Shororkaa fi yakkoota dhimma heeraa lammaffaa jecha ragaalee namootaafi sanadoota Abbaa Alangaa erga qoratee booda murtee laatee jira.
Manni murtichaa himatamaa tokkoffaa Xilaahun Yaamii ajjeechaa Artiist Haacaaluu Hundeessaa raawwachuusaa ragaalee namootaa fi sanadaa abbaan alangaa dhiyeessen mirkanaa'uusaa himeera.
Himatamaa tokkoffaan ilaalcha siyaasaa galmaan gahuuf namoota ajjeesun mootummaa irratti dhiibbaa uumuufi uummata shororkeessuf miseensa shanee Gammachuu jedhamufi yeroof hin qabamne akkasumas nama biraa tokko kan yeroof hin qabamne irraa ergama fudhachuun Artiist Haacaaluu Hundeessaa ajjeesuusaa jecha ragaalee namootaaafi sanadoota Abbaan Alangaa dhiyeessen mirkaneessera jedheera.
Kana malees himatamaan kun to'annoo jala oolee haala yakkicha itti raawwate wayita poolisiitti agarsiisutti adeemsa gochicha itti raawwate viidiyoofi sagalee /sursagalee/ waraabameen agarsiisuunsaas himameera.
Kana malees shugguxiin artiist Haacaalun ittin ajjeefame mana himatamaa tokkoffaatii kan argame ta'uufi rasaasni fi irsaasin iddoo yakkichi itti raawaatamee argaman shugguxicha keessaa kan dhukaafaman ta'uu qorannoo foorensikii adeemsifameen mirkanaa'uusaa manni murtichaa himeera.
Haaluma kanaan dhimmi himatamaa tokkoffaa Xilaahun Yaamii labsii yakka shororkeessummaa ittisuufi to'achuuf bahe 1176/2012 darbuun akka ilaallamufi akka ofirraa ittisu murtaa'e.
Himatamaa lammaffaa Kabbada Gammachuu ilaalcha siyaasaa galmaan gahuuf namoota ajjeesun mootummaa irratti dhiibbaa uumuufi uummata shororkeessuf gochicha raawwachuusaa ragaa namaafi sanadaan abbaa alangaan akka hin mirkanoofne himameera.
Haa ta'uu malee, himatamaan lammaffaa Kabbada Gammachuu himatamaa tokkoffaa kan ta'e Xilaahun Yaamii "rukkunnee yaa saamnu" jedheenii gocha saamichaa raawwachuuf waliigalee walin deemuusaa mirkanaa'uusaatu himame.
Kanaaf gocha kan raawwate itti qophaa'ee waan hin taanef dhimmi isaa seera yakkaa bara 1996 bahe keewwata 540 jalatti akka ilaallamufi akka ofirraa ittisu murtaa'e.
Gama biraatin himatamaa sadaffaa Abdii Alamaayyahu gochicha raawwachuunsaa kan hin mirkanoofne yemmuu ta'u wayita ajjeechaan raawwatamu argee qaama seeraatti beeksisuu dhiisuu isaatin dhimmisaa seera yakkaa bara 1996 bahe keewwata 443/1 A jalatti akka ilaallamufi ofirraa ittisu murtaa'era.
Gama biraatin himatamtuu afraffaa kan taate fi ajjeechaan Artiist Haacaaluu Hundeessaa akka raawwatamuuf haala mijeessun kan himatamte Laamrot Kamaal gahee haala mijeessuu bahachuushee kan agarsiisu ragaaleen namootaas ta'e sanadaa akka hin dhiyaanne manni murtichaa himeera.
Kanaafis Laamrot Kamaal bilisaan akka gadhiifamtu murtaa'era.
Dhumarrattis manni murtichaa ragaalee ittisaa himatamtoota tokkoffaa hanga sadaffaa jiran kan Xilaahun Yaamii, Kabbada Gammachuufi Abdii Alamaayyahu dhaggeeffachuuf Bitootessa 20 fi 21 bara 2013ti beellameera.
Artiist Haacaaluu Hundeessaa booda hookkara uumameen lubbuun namoota 170 ol yoo darbu qabeenyi biiliyoonaan lakkaa'amu manca'uu poolisiin ibseera.
Ajjeechaa isaa hordofee namoota siyaasaafi gaazexeessitoota dabalatee kanneen badii garaa garaan shakkamanii kumaan kan lakkaa'aman to'annoo jala oolanii turan.
Dhaddacha Mana Murtii Haacaaluu Hundeessaa
March 30, 2021, 12:22 p.m.
Dhaddacha: Kanneen ajjeechaa Haacaaluun shakkaman keessa tokko mirga wabiin akka bahu murtaa'e
Aug. 3, 2021, 8:48 a.m.
Ajjeechaa Artiisti Haacaaluutin kan himatamee Xilaahuun Yaamii hidha umrii guutuun itti murtaa'e